▷ Canon EOS R7 Taariikhda Siideynta, Qiimaha, Wararka xanta ah iyo waxa aan dooneyno inaan aragno - 【Isbarbardhigga】 2022
Canon EOS R7 taariikhda sii deynta, qiimaha, xanta iyo waxa aan dooneyno inaan aragno
Kaamirooyinka iyo Kaamirooyinka | 0 Comments
Canon EOS R7 waa inay noqotaa kamarad muhiim ah. Waxaa la sheegay in ay tahay tii ugu horreysay, ama ka mid ah kuwa ugu horreeya, ee mowjad cusub oo ah RF waxay ku rakibtaa kamarado aan muraayad lahayn, oo leh dareemayaal APS-C. Haddii mala-awaalku sax yahay, tani waxay ka dhigi kartaa mid la awoodi karo, haddana awood leh oo lagu galo nidaamka kamarada muraayadda ee Canon, oo leh Xirfadaha ku habboon sawir qaadista duurjoogta, ciyaaraha iyo muuqaalka.
Xayeysiiska: Waxaa weli aad u hore u ah Canon EOS R7 xanta. Ilaa hadda, ma jiraan daloolo waaweyn, waxayna u muuqataa in saamaynta domino ee masiibada ee silsiladaha sahayda iyo gabaabsiga ay suurtagal tahay. waxay dib u riixeen Canon jadwalkii siideynta 2021 xoogaa. Laakiin xanta Canon ee kamarad APS-C ee ugu horeysay ayaa sii socota, ilo lagu kalsoon yahayna waxay soo jeedinayaan inay ugu yaraan ku jirto shaqada.
Sidaas, Maxaan ka filan karnaa wararka xanta ah ee EOS R7? Hadda, dhammaan kamaradaha Canon EOS R, oo ay ku jiraan Canon EOS R5 iyo Canon EOS R6, waxay leeyihiin dareemayaasha jir buuxa. Laakiin sida Canon EOS 7D Mark II dhijitaalka ah SLR, waa in la isku daraa sifooyinka xirfadeed ee APS-C. Tani waxay ka dhigan tahay in aad isticmaali karto lenses la mid ah moodooyinka jir buuxa, iyada oo aan lahayn adapter-ka. Taasina waxay hubaal ahaan ka dhigan tahay dhamaadka taxanaha Canon EOS M, ugu yaraan qaabka aan ognahay maanta.
EOS R7 macneheedu waa Canon's lineup-ka hadda ee kamaradaha aan muraayadaha lahayn ayaa ugu dambeyntii loo habeyn karaa si ka badan sida Sony. Kaamirooyinka aan muraayadda lahayn ee APS-C ayaa wadaagi doona isla buur isku mid ah, laakiin waxaa jiri kara muraayado lens oo kala duwan oo loogu talagalay APS-C iyo moodooyinka qaab-buuxa ah.
La yaabi mayno inaan aragno muraayadaha M-Mount ee hadda jira oo wax laga beddelay si loo waafajiyo isbeddelkan iyo adabtarada ( rajada jaban, profile hoose) si loogu oggolaado milkiilayaasha kamaradaha EOS M inay kor u qaadaan iyada oo aan lahayn madax-xanuun badan. Laakiin, Ka waran kamarada lafteeda? Waa kuwan waxa aan ilaa hadda ognahay, oo ku saleysan sirkii ugu dambeeyay iyo wararka xanta ah.
1 Canon EOS R7 taariikhda sii deynta iyo qiimaha
2 Noocyada 'Canon EOS R7', Leaks, iyo Astaamaha
3 Canon EOS R7: waxa aan rabno inaan aragno
4 Canon EOS R7: Fikradaha hore
Canon EOS R7 taariikhda sii deynta iyo qiimaha
December 2020, waxaa jiray Xanta ah in sawir qaadayaashu ay tijaabinayeen Canon EOS R7 prototypes duurka. Mala-awaal laga helay ilo lagu kalsoon yahay Canon ayaa soo jeediyay taas kamaradu waxay ahayd "ku dhawaad ​​la mid ah Canon EOS R6".
Tan iyo markaas, filashooyinka ayaa xoogaa xanaaqay iyadoo la soo jeediyay in caqabadaha wax soo saarka masiibada iyo yaraanta semiconductor ee socota ay hadda dib u dhigeen qorshayaasha Canon 2021 xoogaa.
Bishii Janaayo 2021, ilo kale oo adag Canon ayaa si maldahan u sheegay in siideynta Canon ee ugu xiisaha badan sanadka ay ku dhamaan karto inay noqoto Canon EOS R1 (ama laga yaabee, in la siiyo warar badan, Canon EOS R3). Maaddaama kan dambe aan la sii deyn doonin illaa Sebtembar, taasi kama tagi doonto meel badan oo loogu talagalay siideyn kale oo weyn 2021. Sidaa darteed 2022 sii deynta Canon EOS R7 waxay u muuqataa sida ugu macquulsan.
Wali ma hayno faahfaahinta qiimaha, laakiin kamarad ayaa laga yaabaa in loogu talagalay nooca dhagaystayaasha ee mar iibsan lahaa Canon EOS 7D Mark II. Kamaradani waxay ku kacday €1,799 / €1,599 markii la sii daayay 2014, inkasta oo ay ahayd waqti aad u dheer ka hor waa in aynaan u qaadan in Canon EOS R7 uu ku iman doono kharash la mid ah.Kamarada APS-C ee ugu fiican Sony, Sony Alpha A6600, waxay markii hore ku kacday €1,400/€1,449/ AU$2,079 waxaana laga yaabaa inaysan ahayn qiimaha ugu xun ee Canon uu bixiyo. Dhammaan waxay ku xiran tahay tirada sifooyinka laga dhaxlo Canon EOS R6.
Xanta dhawaanahan ee June ayaa soo jeedisay in Canon EOS R7 uu noqon karo mid ka mid ah seddexda Kaamirooyinka cusub ee Canon APS-C, oo ka sarreeya heerka gelitaanka Canon EOS R8 iyo EOS R9. Haddii tani run tahay, waxay qaadan kartaa Canon EOS R7 ilaa dhamaadka sare ee kala duwanaanshaha € 2,000, si aad u hesho meel loogu talagalay EOS R9, laakiin tani waa male-awaal saafi ah xilligan.
Noocyada 'Canon EOS R7', Leaks, iyo Astaamaha
Iyadoo Canon ayaan wali si rasmi ah ugu dhawaaqin mid ka mid ah astaamaha Canon EOS R7, Waxaan haynaa qaar ka mid ah daadad lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaya qaar ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan.
Canon EOS R7 waxay u badan tahay inuu haysto 32,5 MP APS-C dareeraha. Canon wuxuu hore u lahaa khibrad naqshadaynta dareemayaasha cabbirkan iyo xallinta. 6 Canon EOS M2019 Mark II, tusaale ahaan, waxa kale oo uu leeyahay 32,5 MP APS-C.
Kaamiradan cusub waxay u badan tahay inay la timaado dhowr horumar oo muuqda oo qaadan doona horyaal ka sarreeya EOS M6 Mark II. Midka ugu badan ee ka laadlaadda dheelitirka ayaa ah XNUMX-dhinaca sawirka xasilinta (IBIS). Dhulka Sony waxaad ka helaysaa kaliya kan ugu sarreeya Alpha A6600, laakiin ilaa hadda Wararka xanta ah ayaa isku dhafan oo ku saabsan in lagu dari doono EOS R7 iyo in kale.
Haddii IBIS ay guulaysan lahayd, waxay u badan tahay inay kordhiso miisaanka iyo qiimaha EOS R7 ee EOS R8 iyo R9 -dhamaadka hoose, taasoo ka dhigaysa mid la mid ah cabbirka iyo qaabka Canon EOS R6. Markaan sidaas yidhi. EOS R8 waxaa lagu xamanayaa inuu yahay kamarad "vlogger", taas oo aan shaki ku jirin inay sidoo kale faa'iido u leedahay IBIS.
ka Faahfaahinta fiidiyowga ee la filayo ee EOS R7 waxaa ku jira qaabka ugu badan ee qabashada 4K / 60p ama 120fps ee 1080p xallinta dhaqdhaqaaqa gaabis ah. Tani waxay noqon doontaa horumar muuqda oo ka sarreeya 4K/30p ee Canon EOS M6 Mark II iyo Sony A6600.
Canon EOS R7 waa inuu sidoo kale awood u yeesho inuu qabsado 10-bit video midabka gudaha, si loo waafajiyo Fujifilm X-T4 ee ugu fiican. Canon wuxuu leeyahay shaqo dhab ah oo uu ku sameeyo halkan, maadaama Canon EOS M6 II uusan ku jirin horyaal la mid ah sida ay xafiiltamaan Sony ama Fuji faahfaahinta 4K ee fiidiyowga.
Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in Canon uu ka fiicnaan doono Sony's IBIS wax ku oolnimada fiidiyowga, waana fikrad wanaagsan in la isticmaalo xasilinta laba-nidaam, dijitaal ah iyo IBIS.
Si kastaba ha noqotee, daadadyadani waxay sidoo kale soo jeedinayaan in Fujifilm X-T4 uu ku hayn karo gees si tartiib tartiib ah, maadaama ay ku dhufan karto 1080p ilaa 240fps, halka EOS R7 ay tahay inay ku dhegto 120fps. Canon wuxuu ku tiirsanaan karaa dareemadiisa xallinta sare si uu rafcaan ugu qaato sawir qaadayaasha doonaya faahfaahin dheeraad ah. Waxaana hubaal ah inay arrintu noqon doonto.
Wali ma naqaano inta xalkan sare ee macquulka ah uu saameyn doono xawaaraha toogashada. Laakiin, sida had iyo jeer, waxaan ka raadin karnaa tilmaamo kamarad hore.
Canon EOS M6 Mark II wuxuu leeyahay xal isku mid ah, laakiin wuxuu ku gaaraa 14fps cajiib ah oo leh autofocus, ama 30fps iyadoo la adeegsanayo qaab dillaacay 17,9MP ah oo la jarjaray. Way ka yara gaabis tahay 20fps ee Fujifilm X-T4 ee hooseeya (kaaso sidoo kale toogan kara 30fps dalagga).
Waxaan haysanaa sabab aan ku rajayno horumar. EOS R7 waxay isticmaali doontaa nooca processor-ka Digic X, kaas oo noqon lahaa DIGIC 8 casriyeyn ka Canon EOS M6 Mark II. Ma aha farqi laba-jiil ah, oo ay soo jeedinayaan tirooyinkan, kaliya farqi qarni. Lambarka sagaalaad waxaa loo arkaa nasiib darro Japan, mana aha wax aan caadi ahayn in shirkadaha Japan sida Canon ay si xarrago leh uga boodaan magacyada "9".
Tan macnaheedu waa toogashada dilaaca waxay u badan tahay inay noqon doonto inta u dhaxaysa 14 iyo 20fps, iyo hab goynta degdega ah waxay u badan tahay in la bixin doono.
Canon EOS R7 waxaa loogu talagalay ciyaaraha isboortiga, duurjoogta iyo sawir-qaadista, sida laga soo xigtay ilo laga soo xigtay Canon, ilaa hadda waxay u muuqataa inay shaqeyso. Processor cusub ayaa sidoo kale la filayaa inuu hagaajiyo xawaaraha ogaanshaha mawduuca autofocus, haddii "mawduuca" diiradda la saarayo uu yahay isha, wejiga, ama xayawaanka. Nidaamka diiradda saaraya dhabta ah wuxuu ku xirnaan doonaa dareenka, welina ma garanayno haddii aan arki doonno casriyeyn weyn oo lagu ogaanayo marxaladda EOS M143 Mark II ee 6-dhibcood.
Canon EOS R7: waxa aan rabno inaan aragno
Marka laga reebo kala duwanaanshaha IBIS ee khadka cusub ee saddexda nooc ee EOS R7, EOS R8 iyo EOS R9, run ahaantii ma hubno waxa kale oo kala saari doona moodooyinka. Waxay u badan tahay inay wadaagi doonaan dareen isku mid ah, oo uga tagaya waxyaabaha ay ka midka yihiin qaabka shaashadda danbe iyo xallinta, qaabka xakamaynta, iyo tayada daawashada elektarooniga ah inta kale.
Waxaan rajeyneynaa inaan aragno a 3.69 milyan oo dhibco elektaroonik ahugu yaraan on Canon EOS R7. Waxaan sidoo kale filaynaa xallinta la dedejiyey ee 5,76 milyan dhibcood, taas oo ay u badan tahay inaysan macquul ahayn.
Haddii tani ay tahay kamarad sawir qaade oo macquul ah oo halis ah, waxaan jeclaan lahayn inaan aragno shaashad si buuxda u qeexeysa. Iyo Canon EOS R8 ee aan la rarin waxay isticmaali kartaa shaashad 180-degree ah halkii, in kasta oo taasi ay saameyn ku yeelan doonto cidhifyada kamarada sare. Shaashadda rogrogmi karta faa'iido badan ma leh haddii ay jirto tuulmo weyn oo EVF ah oo halkaas ku yaal.
Canon EOS M50 Mark II wuxuu leeyahay nooca shaashadda si buuxda u qeexaya oo aan jeclaan lahayn inaan ku aragno Canon EOS R7.
Si kastaba ha ahaatee, Habka Canon ee muraayadaha EOS R7 waa mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn halkan. Kamaradu waxay awoodi doontaa inay isticmaasho muraayadaha loogu talagalay Canon's kamaradaha muraayadaha buuxa ee aan muraayadda lahayn, laakiin ma jiri doonaan muraayado khafiif ah oo loogu talagalay kamaradahan APS-C ee yaryar?
Waxay noqon lahayd. Iyadoo aanad helin goosashada iyo feejignaanta waxaad arki doontaa markaad isticmaalayso lenska APS-C ee kamarad buuxa sababtoo ah waxaad isticmaalaysaa dhammaan dareenka laakiin qayb ka mid ah muraayadaha, muraayadaha EOS R7 ee u heellan waxay isticmaali karaan muraayado yaryar. iyo canaasiirta muraayadaha. Taas macneheedu waxa weeye waxay noqon karaan kuwo yaryar, fudud, oo inta badan ka jaban natiijada.
Haddii Canon uu hoos u dhaco jidkan, waxaan rajeyneynaa in muraayadahani ay yeelan doonaan diiradda aamusnaanta, sida Tani waxay noqon kartaa hab Canon uu ku soo jiito sawir-qaadayaasha iyo YouTubers nidaamka Fujifilm.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha wax Canon uu daruuri u baahan yahay inuu wax ka qabto xawaare buuxa. Waxaad horeba u heli kartaa RF 50mm f1.8 iyo RF 24-105mm qiimo macquul ah, iyo rafcaanka oo dhan Canon EOS R7 APS-C waxay u badan tahay inay kaa badbaadiso inaad lacag buuxa ku bixiso riiggaaga.
Canon EOS R7: Fikradaha hore
Canon EOS R7 waa, aragti ahaan, calaamad u ah shay dib-u-cusbooneysi ah oo loogu talagalay kamaradaha Canon ee APS-C.. Waa fursad ay shirkaddu uga hor boodi karto Fujifilm iyo Sony awooddeeda sawir qaadayaasha iyo sawir qaadayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, Wali waa xanta hadda jirta iyo mid ay xoogaa mugdi galisay mala-awaal dhowaan la isla dhexmarayay oo sheegayay in Canon uu horumarin doono kamaraddeeda ugu jaban ee buuxa. Haddii wararka xanta ah ee lagu kalsoonaan karo ay run yihiin oo € 799 ku guulaysta qaab-dhismeedka buuxa ee Canon EOS RP uu yimaado 2022, taasi waxay yara daciifin doontaa kiiska moodooyinka APS-C ee buurta RF ee Canon.
Taasi waxay tidhi, Canon 7D Mark II had iyo jeer waxay ahayd kamarad khaas ah oo ka badan qalab badan sida EOS RP, EOS R7 waxay u badan tahay inay raacdo maskaxdaas, oo bixisa isku-dar ah xawaaraha, tayada iyo waxqabadka iyo qiimaha.